एक्सपोजर प्रभावको समान छैन: यो मूल्य मापन गर्न प्रभावहरू प्रयोग गर्न रोक्ने समय हो | Martech Zone
एक्सपोजर प्रभावको रूपमा समान होइन: यो मान मापन गर्न प्रभावहरू प्रयोग गर्न रोक्ने समय हो
सोमवार, जुलाई 15, 2019 सोमवार, जुलाई 15, 2019 श्यानन टकर
प्रभावहरु के हुन्?
छापहरू तपाईको कहानी वा सामाजिक मिडिया पोष्टमा अनुमानित पाठकहरू / आउटलेट / स्रोतका दर्शकहरूमा आधारित सम्भावित नेत्रगोलकहरूको संख्या हुन्।
२०१ 2019 मा, प्रभावहरू कोठाबाट बाहिर हाँसेछन्। अरबौंमा प्रभावहरू देख्नु असामान्य कुरा होइन। पृथ्वीमा billion अरब मानिस छन्: ती मध्ये १ अरबको बिजुली छैन, र अन्य धेरै जसो तपाईको लेखको बारेमा मतलब गर्दैनन्। यदि तपाईंसँग १ अरब प्रभावहरू छन् तर तपाईं आफ्नो ढोकाबाट बाहिर जानुहुन्छ र एक व्यक्तिले तपाईंलाई लेखको बारेमा भन्न सक्दैन, तपाईंसँग गलत मेट्रिक छ। उल्लेख गर्नु हुँदैन, तपाईंको कति सार्वजनिक सम्पर्कहरू केवल बोटहरू हुन्:
बट्सले २०१ Internet मा सबै इन्टरनेट ट्राफिकको लगभग %०% ड्राइभ गर्यो।
डिस्टिल नेटवर्क, Bad Bot रिपोर्ट २०१ 2019
तपाइँको त्रैमासिक पुन: प्राप्ति रिपोर्टहरू संगठन र PR एजेन्सी वा तपाइँ र तपाइँको हाकिम बीचको सम्झौताको रूपमा सोच्नुहोस् - यो हामी कसरी सफलता परिभाषित गर्नेछौं र हामी यसलाई मापन गर्न कसरी सहमत छौं। तपाईंले अझै पनि इम्प्रेसनहरू दिन आवश्यक पर्दछ किनकि तपाईंको ग्राहक वा मालिकले उनीहरूको लागि सोधे। यद्यपि चाल दुई चीजहरू गर्नु हो:
प्रदान गर्नुहोस् सन्दर्भ ती प्रभावहरुमा
प्रदान गर्नुहोस् थप मेट्रिक्स त्यो राम्रो कथा बताउँछ।
सार्वजनिक सम्बन्ध मेट्रिकको लागि प्रतिस्थापन समावेश हुन सक्छ:
नेतृत्व वा रूपान्तरणको संख्या। तपाईंको प्रभावहरू क्वार्टरमा क्वार्टरमा जान सक्छ, तर तपाईंको बिक्री अझै सपाट छ। त्यो किनभने तपाईंले सही व्यक्तिलाई लक्षित नगरेको हुनसक्दछ। कति उत्पादन हुन्छ तपाईले कति लेड बनाउनुहुन्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस्।
जागरूकता परीक्षण: सर्वेक्षण बाँदर जस्ता उपकरणको प्रयोग गरेर कति जनाले खबरमा तपाईंको उत्पादन वा पहल देखे र त्यसको कारणले व्यवहार वा परिवर्तन व्यवहार गरे?
गुगल एनालिटिक्सs: वेब ट्राफिकमा स्पाइक खोज्नुहोस् जब तपाईको खबर आएको थियो। यदि लेखले ब्याकलिink्क समावेश गर्दछ भने, कति व्यक्तिले वास्तवमा लेखबाट तपाइँको वेबसाइटमा क्लिक गरेको पत्ता लगाउनुहोस् र उनीहरूले त्यहाँ कति समय बिताए हेर्नुहोस्।
एक / बी परीक्षण। मिडिया र सोशल मिडिया मार्फत एक नयाँ उत्पादन वा बिक्री घोषणा गर्नुहोस् तर तिनीहरूलाई फरक प्रचार कोड दिनुहोस् जुन अधिक ट्राफिक (मिडिया वा सामाजिक) पुग्यो भनेर निर्धारण गर्न।
सन्देश विश्लेषण: तपाईका कति मुख्य सन्देशहरू लेखमा समावेश गरीएको थियो? मात्रा भन्दा बढी गुण बढी महत्त्वपूर्ण छ।
यो विचार गर्नुहोस्: बहाना गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूसँग एउटा कोठामा हुनुहुन्छ। तपाईले चर्को स्वरमा चिच्याउनुहुनेछ — तर तपाईंको शान्त प्रतिस्पर्धीहरूले बिक्री ड्राइभ गर्न, जागरूकता बढाउन, र स्पार्क परिवर्तन गर्न PR प्रयोग गर्दैछ।
राम्रो PR एक फरक गर्न को लागी मिडिया को उपयोग को बारे मा छ - र सही मेट्रिक्स को लागी काम गरीरहेछ हेर्न को लागी।
टैग: ab testजागरूकताBots
श्यानन एक अनुभवी सार्वजनिक सम्बन्ध पेशेवर हो जसले समाचारमा ग्राहकहरू पाउँछन्। श्याननले कमाएको, भुक्तानी गरेको, र स्वामित्व मिडियाको संयोजन गरेर एकीकृत सार्वजनिक सम्बन्धको शक्तिमा विश्वास गर्दछ। श्यानन एसएसपीआरमा वरिष्ठ निर्देशक मिडिया सम्बन्ध हुन्।